भाषालाई लज्जित बनाउँदै शीर्ष नेता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका शब्दजाल बुनेर श्रोतालाई बिलखबन्दमा पार्ने कम्युनिस्ट नेताहरु हिजोआज सार्वजनिक गाली बेइज्जतीमा उत्रिएर राजनीति, समाज र सभ्यताको दोहोलो काढ्दै
ओलीले नेपाललाई–गद्दार, देशद्रोही, संसारमै सबैभन्दा बढी लाजसरम पचेको मान्छे, केजातिलाई घिउ नपचेको, हरिया साँपहरु, कुहिएका फर्सीहरु, कुपात्रहरु, कुहिएर झरेका पात, फोहोरको झिँगा, मधु–कैटभ (दाहाल–नेपाल) राक्षस
ओलीले दाहाललाई– भैंसी र भेडाभन्दा पनि काम नलाग्ने मान्छे, धोकेबाज, बेइमान, छट्टु, राक्षस
आश्विन ७, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — एमाले जिल्ला कमिटी बर्दियाले बुधबार गुलरियामा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै नयाँ कुरा सुनाएनन् । पुरानै शैलीमा आफूविरोधी र हालै मात्र एमालेबाट अलग्गिएकाप्रति आक्रोश पोखे । उनले अलग्गिएकाहरूलाई ‘कुहिएर झरेको पात’ को संज्ञा दिए ।
भदौ २२ मा पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा पनि ओली यस्तै शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यो दिन उनले एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपाललाई ‘कुपात्र’, ‘हरियो साँप’, ‘कुहिएको फर्सी’ र ‘उम्रिन नसकेको प्युसो’ को संज्ञा दिएका थिए ।
पोखरादेखि बर्दियासम्मका बीच १५ दिनमा ओलीले गरेका भाषणहरू केलाउने हो भने आक्रोश, गाली र तुच्छ शब्दको सानोतिनो संकलन भेटिन्छ । राजनीतिक दलका अगुवाले आफ्नो असहमति र आक्रोश व्यक्त गर्न घृणाजन्य शब्दहरूको सहारा लिने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली एक्लो पात्र भने होइनन् । मर्यादित, भद्र र शालीन रूपमा पनि आफ्नो असहमति वा फरक मत राख्न सकिन्छ भन्नेमा ओलीको वचनको गोली भेटिरहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पनि सायदै विश्वास राख्छन् ।
नवगठित पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले मंगलबार पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीलाई षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थालेकोदेखि निरंकुश, स्वेच्छाचारी भएकोसम्मका आरोप छन् । प्रस्तावमा ओलीमा दम्भ र घमण्ड देखिएको, विखण्डनकारी अडानमै रहिरहेको भनी टिप्पणी गरिएको छ । नेता नेपालले ओलीलाई दक्षिणपन्थी चिन्तन भएको, सत्तालिप्सा, स्वेच्छाचारी एवं सर्वसत्तावादी चरित्र, गफाडी, अहंकारी र दम्भीको उपमा पनि दिएका छन् ।
विरोधीहरूप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मर्यादित र सभ्य रूपमा विरलै प्रस्तुत हुन्छन् । गत सोमबार मात्रै सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ओलीलाई निरंकुश मात्रै भनेनन् भ्रष्ट र झेली नेता उपमा पनि दिए । काठमाडौंमा भदौ ३१ मा आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले पुराना सहयात्री नेपाललाई फोहोरको झिँगासँग तुलना गर्न हिचकिचाएनन् । उनले नेता नेपाललाई व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ, इगो, अहंकार, ईर्ष्या भाव र कुण्ठाबाट ग्रसित भएको व्यक्तिसमेत भन्न भ्याए । उनले घरमा आगो लगाई खरानी धसेर तीर्थयात्रामा हिँडेको मानिसका रूपमा समेत नेता नेपाललाई चित्रण गरे । साउन १६ मा काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बैठकमा ओलीले नेपालसहितका नेताहरूलाई अपराधीकै रूपमा चित्रण गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘माधव नेपालजस्ता आन्दोलनविरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन ।’
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आफूभन्दा कनिष्ठ नेताहरूप्रति मर्यादित भाषाको प्रयोग नगर्ने, हप्कीदप्कीको शैलीमा प्रस्तुत हुने र भाषिक र पदीय मर्यादाको ख्याल नगर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनले भदौ १८ मा वडा अधिवेशनको सुरुवात गर्न भक्तपुर पुगेका बेला मञ्चबाटै पार्टीका जिल्ला सभापतिलाई हप्कीदप्कीको शैलीमा कुरा गरेको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको थियो ।
घृणायुक्त शब्दहरूको सहारा लिने, विषयलाई उत्तेजित रूपमा पेस गर्ने र अनेकन तुच्छ बिम्बहरूमार्फत विरोधीमाथि खनिने शीर्ष नेताहरूको शैलीले सभ्य, भद्र र भाषिक मर्यादासहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बिर्साउँदै लगेको छ । घृणा र आक्रोशयुक्त वाणीको प्रयोग गर्ने शैलीको सिको दोस्रो तहका नेताहरूमा पनि बढ्दै छ । प्रेस चौतारी नेपालले असोज ५ मा पोखरामा गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले एकीकृत समाजवादीमाथि आक्षेप लगाउने क्रममा भनेका थिए, ‘के माधव नेपाल अवैध सन्तान हुन् ? आफैंले जन्माएको बाबुआमा नचिन्ने कुपुत्र हुन् ?’ सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रमा नफर्की एमालेमै रहेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भदौ ३१ मा काठमाडौंमा आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा विरोधीलाई गाली गर्ने क्रममा दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी जस्ता शब्द दोहोर्‍याइरहे ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा मर्यादित र आक्रोशरहित रूपमा प्रस्तुत भएको विरलै सुनिन्छ । सार्वजनिक मञ्चहरू शीर्ष नेताहरूले गर्ने तुच्छ कटाक्ष र व्यक्तित्वलाई खसाल्न प्रयोग गरिने बिम्बपूर्ण भाषणले उत्तेजना फैलाउन र हिंसा विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले भदौ २६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी अनुदानको एमसीसी परियोजना सरकारले लागू गरे देशमा आगो नै लाग्ने बताउन भ्याए । एमालेकी सांसद रेखा झाले भदौ २५ मा संसद्भित्रको उछलकुदपछि बाहिर आएर आफूले सभामुखको टाउको नै फुटालिदिन खोजेको बताइन् ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले प्रयोग गर्ने हप्कीदप्की र कटाक्षपूर्ण भाषा सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ मात्रै बन्दैनन्, टिकटक प्रयोगकर्ताले त्यस्ता भाषा टप्प टिपेर अनेक थरी व्यंग्य भिडियो पनि बनाइरहेका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलिइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तालाई व्यंग्य गर्दै नेता दाहालले भनेका थिए, ‘नाटकै हो ।’ दाहालको भनाइमा जवाफ दिँदै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका दिए, ‘नौटंकी नै हो ।’ ‘नाटकै हो’ र ‘नौटंकी नै हो’ भन्ने सवाल जवाफको भिडियो क्लिप टिकटकमा भाइरल भयो । फेसबुकका लाखौं फ्यान फलोइङ भएका मिम पेज हुन् कि टिकटकमा हजारौं सेयर भएका भिडियो, तिनमा दलका शीर्ष नेताले बोलेका उटपट्याङ कुरा, आक्रोश र घृणालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जनका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ ।
भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेल राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट भाषाको मर्यादा मात्रै नउडाएर आफ्नै ओज पनि गुमाइरहेको टिप्पणी गरे । उनले अरूको अपमान गर्दागर्दै आफ्नो छवि बिग्रेको नेताहरूले चाल नै नपाइरहेको बताए । ‘भाषा मात्रै होइन, सामान्य शिष्टाचारको शब्द पनि राजनीतिबाट हराउँदै जान थाल्यो,’ उनले भने, ‘हरेक दलभित्र अनुशासन विभाग हुन्छ । शीर्ष नेताले नयाँ पुस्ताका नेतालाई त्यस विभागबाट पाठ पढाउने गर्छन् । तिनीहरूले भाषिक मर्यादा र शिष्टताबारे के पढाउँलान् !’
राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम शीर्ष नेताहरूका सार्वजनिक भाषणलाई तुच्छताको चरम नमुनाका रूपमा बुझ्छन् । उनले पार्टी हाँक्ने व्यक्तिहरूमा देखिएको वैचारिक दरिद्रता उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट झल्किरहेको बताए । ‘वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका नेताहरू भएकैले राजनीति यो अवस्थामा आइपुगेको हो,’ उनले भने । शीर्ष नेताका व्यक्तिकेन्द्रित घृणा र आक्रोशजन्य गालीले भरिएको भाषणले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जन्माइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘यस्तै अभ्यासले निरन्तरता पाइराख्यो भने समाजले नेताको चरित्र हेरेर राजनीतिलाई बुझ्ने प्रवृत्ति विकास हुनेछ । त्यसको मूल्य समय क्रममा समाजले चुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले आम मानिसलाई भावनात्मक रूपमा उराल्ने पुरानो शैली राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिँदा पनि कायमै रहेको बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रकी पूर्वउपप्राध्यापकसमेत रहेकी उनले राजनीतिमा कस्तो भाषा चलिरहेको छ भनेर बुझ्न संसद्भित्र कस्ता शब्द चयन भइरहेका छन् भनेर हेर्दा पनि थाहा हुने बताइन् । ‘महिला, जनजातिलगायतका समुदायलाई असर पर्ने शब्द पनि संसद्मा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर्कका आधारमा म ठीक छु भन्दा पनि अरू गलत छ भनेर प्रमाणित गर्नमा जोडबल देखिन्छ ।’
उनले एकले अर्कालाई जतिसक्दो बढी गाली गर्ने राजनीतिक शैलीबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । शीर्ष नेताहरू ‘इतिहास नै हामी हौं, वर्तमान पनि हामी हौं र भविष्य पनि हामी हौं भन्ने सोचबाट ग्रसित’ रहेको भट्टराईले बताइन् । भट्टराई स्वयंले पनि चुनावका बेला राजनीतिक वृत्तबाटै घृणाजन्य र अपमान गर्ने अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपरेको थियो । ‘तर, ती अभिव्यक्तिलाई वास्ता गरिनँ,’ उनले भनिन् ।
कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।
आश्विन ७, २०७८ जनार्दन थापा
अन्तरिक्ष पर्यटनको सुरुआत भइसकेको युगमा जयसिंहहरूले सर्कसको कलाकारले झैं तुइनमा झुन्डिएर आफ्नै मुलुकको राजधानी आउन पनि विदेशी भूमि टेक्नैपर्ने बाध्यता कम विडम्बनापूर्ण छैन । अझ महाकालीभन्दा लामो सम्बन्ध भएको हाम्रो ‘मित्र’ राष्ट्रको सीमा सुरक्षा बलले जयसिंहहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको खतरा देखेर नदीको बीचमै खसाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि बुझिनसक्नु छ । यो सुरक्षा बलको सनक र क्रूरताका कारण भएको मात्र नभएर हाम्रो इतिहास र बर्तमानको यथार्थबीचको असङ्गतिलाई उजागर गर्ने प्रतिनिधि घटना पनि हो । विडम्बना !
कहिले ‘पराधीन’ नरहेको राज्यका नागरिक हामी जीविका चलाउनैका लागी महामारीको समेत पर्बाह नगरीकन लर्को लाएर बिदेशी भूमिमा गएर श्रम गर्न अभिशप्त छौं । तीमध्येकै थिए— जयसिंह । हिजो बेलायती साम्राज्यको रक्षार्थ पसिना र रगत बगाउने हामी अहिले पनि गर्जो चलाउनकै लागी विदेशी मुलुकहरूमा कौडीको भाउमा पसिना साट्न बाध्य छौं । तर हाम्रा शासकहरू त्यही पसिनामाथी वैभवको डुङ्गा चलाएर पारि तरिसकेका छन् । अझ, उनीहरू मात्र नभएर उनीहरूका सन्तान–दर–सन्तानका लागि समेत जयसिंहहरूले जस्तो तुइनमा झुन्डिएर पारि तर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
लामो समयदेखि शासकहरूले नेपाल कहिले अरूको अधीनस्थ नरहेको आत्मगौरवको उपयोग गर्दै आएका छन् । यो नेपाली राष्ट्रवादको एउटा मूल भाष्य पनि रहँदै आएको छ र यसले आम नेपाली मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यस्तो भाष्यको निर्माण र निरन्तरतामा उपनिवेशका चतुर शासकहरूले थुमथुम्याउन लगाइदिएको स्वतन्त्रताको पगरी एवं नेपाली समाज र संस्कृतिको अध्ययन गर्नेहरूको दृष्टिदोषको समेतको योगदान छ । मानवशास्त्री मेरी डेसनका अनुसार विगतमा नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने मानवशास्त्रीहरूलगायतका विदेशी शोधकर्ताहरूले नेपाललाई ‘फोसिल स्टेट’ का रूपमा बुझेका थिए । अर्थात् नेपाललाई उपनिवेशवादका प्रभावहरूबाट अछुतो रहेको र एक प्रकारले जड अवस्थामा रहेको समाजका रूपमा बुझ्ने त्रुटि गरेका थिए ।
यस्तो बुझाइका कारण नेपालका सन्दर्भमा उपनिवेशवादको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने पाटोमा अध्ययन हुनै सकेन । तसर्थ यसले पनि ‘कहिले पराधीन नरहेको’ भन्ने भाष्यको निरन्तरतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सघायो । यथार्थमा, नेपाल उपनिवेशवादबाट सघन रूपमा प्रभावित थियो । उपलब्ध प्रमाणहरूले उपनिवेशकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वहरूलाई पुष्टि गर्छन् । तर यो भारतसहित प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेका समाजहरूको भन्दा पक्कै पनि फरक अनुभव थियो ।
नेपाललाई एकतिहाइ भू–भाग गुमाउने गरी भएको एकपक्षीय सुगौली सन्धिपछि बेलायतको आवासीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाउन दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । ‘ब्रिटिस राज’ को औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभुत्वको इतिहास बोकेको तर नाम फेरिएको लाजिम्पाटको अड्डाले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रभुत्वको इतिहासलाई पुनरुत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले पनि त्यो हाम्रा शासकहरूका लागि सुमेरु पर्वतजत्तिकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा रहेकै छ । नेपालले ‘ब्रिटिस राज’ मार्फत मात्र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न पाउने सर्तले पनि राजनीतिक प्रभुत्वका बारेमा धेरै बताउँछ । नेपालमा १०४ वर्षसम्म, एक प्रकारले आन्तरिक उपनिवेश चलाएको राणाशाहीले ‘ब्रिटिस राज’ को साझेदार भएकै कारण पनि दह्रो जरो गाड्न सफल भएको थियो ।
आर्थिक प्रभुत्वका सन्दर्भमा नेपालमा बहसमा आइरहने गोर्खा भर्तीको इतिहास उल्लेखनीय छ । नेपालबारे दखल राख्ने ब्रायन हड्सन (जो नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि पनि थिए) लगायतका रणनीतिकारहरूले नेपालको उपयोग गर्न सकिने मुख्य स्रोतका रूपमा नेपाली युवाहरू रहेको पहिचान गरे र ‘ब्रिटिस राज’ ले आफ्नो साम्राज्यवादी अभियानमा यो स्रोतको भरपुर उपयोग पनि गर्‍यो । अहिले बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूमाथि गरिएको विभेद त्यही साम्राज्यवादी सम्बन्धको धङधङीको परिणाम पनि हो । ‘ब्रिटिस राज’ को आर्थिक प्रभुत्व र शोषणको उदाहरण नेपालको वन स्रोतको दोहन पनि हो । भारतमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा नेपालबाट बिनाशुल्क भारी मात्रामा सालका काठ लगिएको इतिहास छ । सन् १९२५ देखि १९३० सम्म नेपालको वन व्यवस्थापनको सल्लाहकार बनेका बेलायती प्रतिनिधि जे.भी. कोलियरको योजनामा नेपालका सालका काठहरूको औपचारिक निर्यात सुरु भएको देखिन्छ ।
ऐतिहासिक रूपमा रहेको सांस्कृतिक प्रभुत्वका उदाहरणहरूको फेहरिस्त पनि लामै छ । विशेषगरी सत्ताको पर्यायवाची बनेको सिंहदरबारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । शासकीय रबाफको विम्ब बनेको यो वास्तु संरचना उपनिवेशकालीन सांस्कृतिक प्रभुत्वको साक्षीका रूपमा पनि हाम्रा अगाडि गजधम्म उभिएको छ । यसले हाम्रा अरनिकोले चीनसम्म पुर्‍याएको वास्तुकलाको साखलाई पनि छायामा पारेको छ । चिनियाँका लागि झोङ्ना नाहाई र बेलायतीका लागि बकिङ्घम प्यालेसले जुन प्रतीकात्मक अर्थ राख्छन् हाम्रा लागि सिंहदरबारले त्यस्तै अर्थ राख्दैन । भूकम्पले धर्मराएको सिंहदरबारको ‘रेट्रोफिटिङ’ ले उपनिवेशकालीन अवशेषको निरन्तरताको प्रतीकात्मक अर्थ पनि राख्छ । यद्यपि यसको अर्थ, सांस्कृतिक–ऐतिहासिक निधिका रूपमा रहेका कला र संरचनाहरूको विध्वंश गर्ने वैचारिक अन्धता सही हो भन्नेचाहिँ होइन ।
साम्राज्यवादको प्रभुत्वमा नरहेको आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा इतिहासको यथार्थलाई स्विकार्नुले समस्याको चुरोमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छ । उपनिवेशको इतिहाससँग जोडिँदैमा लघुताभास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । उपनिवेशवाद मानव समाजको खास ऐतिहासिक कालखण्डको बृहत् घटना हो । तसर्थ यसलाई स्विकार्दैमा ‘वीर’ को पहिचानमा दाग लाग्छ भन्ने ठान्नु खास राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न निर्माण गरिएको भ्रमको वशमा रहनु पनि हो । कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि अहिलेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।
आर्थिक रूपमा रहेको एकल प्रभुत्व तथा राजनीतिमा छताछुल्ल देखिने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ उपनिवेशकालीन विरासतका पनि उपजहरू हुन् । यसले नेपालको बृहत् अर्थ–राजनीतिक संरचनामा मात्र नभएर जयसिंहजस्ता आम नेपालीहरूले दैनन्दिन रूपमा भोग्ने सूक्ष्म घटनाहरूसँग पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । घामजस्तै छर्लङ्ग देखिएको घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दा देखिएको सकसका पछाडि के कारण थियो, अनुमान गर्न कठिन छैन । यसैबाट पनि सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ, जयसिंहहरूलाई न्याय दिलाउन र औपनिवेशिक इतिहासको अवशेषका रूपमा रहेको हेपाहा र चेपाहा प्रवृत्तिहरूबारे प्रश्न गर्न हाम्रो ‘स्वाधीन’ राज्यलाई कति गाह्रो पर्ला । त्यही भएर होला, सरकारले बेलैमा जयसिंहका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने साहसिक घोषणा गरिसकेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा गुजुल्टिएका सम्बन्धहरूलाई स्विकार्नु समस्याहरूलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । ऐतिहासिक घटना र त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई इन्कार गर्नु भनेको सुतुरमूर्गले बालुवामा मुन्टो लुकाउनुजस्तै हो । यो राज्यको मात्र नभएर आम नागरिकको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । धारे हात लगाउने र ‘स्वाभिमान’ को गुलियो भाष्यमा मखलेल हुनेभन्दा पनि समस्याहरूबारे वस्तुगत धारणा बनाउने हो भने पनि ऐतिहासिक रूपमा रहेका असमान सम्बन्ध र व्यवहारहरूलाई सत्ताको रोटी सेक्न मात्र उपयोग गर्ने र समस्या समाधानको अर्थपूर्ण प्रयासका लागि आँट र जाँगर नदेखाउने सुतुरमुर्गे प्रवृत्तिमाथि थोरै भए पनि प्रहार गर्न सकिएला । अन्यथा, ऐतिहासिक रूपमै जयसिंहहरूप्रति भइरहेका अन्यायहरू छानबिन, प्रतिवेदन र विज्ञप्तिको गोलचक्करमै रुमल्लिइरहनेछन् ।
(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०१